Oniversiten’i Mahajanga: Mpianatra maherin’ny 50 hiakatra CODIS
vendredi, 03 novembre 2017 10:31
Tahirin-tsary Sobika Mahajanga
Ny 8, 9 ary ny 10 novambra izao no hiakatra Conseil de discipline ( CODIS) ireo mpianatra rehetra ao amin’ny oniversiten’i Mahajanga voasaringotra nandritra ireny korontana teny amin’ny campus ireny. Io no fanambarana nataon’ireo tompon’andraikitry ny oniversite nandritra ny fampiantsoana mpanao gazety natao omaly alakamisy 02 novambra maraina teny amin’ny Kakal Mahajangabe.
Raharaha maro samihafa no iampangana ireto mpianatra ireto, araka ny efa nohamafisin’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa tsy hisy ho avela afa-maina ireo rehetra nandray anjara tamin’ny korontana. Fikonokononana grevy, fanakanana ny lalana niditra ny campus, fandorana sy fanimbana bloc, fandrobana fananan’ny mpianatra, fifandratran’ny samy mpianatra sy ny maro hafa.
Taorian’ireny savorovoro ireny, tsy mbola miverina ny fampianarana eny anivon’ny oniversite hatreto na efa nanamafy aza ny filohan’ny oniversite fa tsy ho taona fotsy ity taom-pianarana ity. Efa vita avokoa ny fanadiovana ireo bloc rehetra na ny eny Ambondrona na ny eny amin’ny cité Tsaramandroso rehefa nesorina ireo mpianatra.
Efa manao ny asany kosa ny Conseil consultatif izay natsangana hikaroka vahaolana mahakasika ny oniversite ka nahatongavana amin’izao dingana izao indray, dia ny hanasaziana ireo mpianatra rehetra nandray anjara tamin’ny fanakorontanana.